Dawladaha Uganda iyo Burundi oo gacmo wadajir ah kusoo dhaweeyay hawl-galka Kenya ay ka wado Soomaaliya. – Radio Daljir
Dawladaha Uganda iyo Burundi oo gacmo wadajir ah kusoo dhaweeyay hawl-galka Kenya ay ka wado Soomaaliya.
Nofeembar 12, 2011 12:00 b 0
Nayrobi, Nov, 12 ? Warbixin laga soo saaray maalintii shalay ahayd xafiiska madaxwaynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa si cad loogu sheegay in xukuumaddaha Uganda iyo Burundi ay si kal-iyo laab-leh u soo dhaweeyeen hawl-galka ay dalka Soomaaliya ka wado xukuumadda Kenya.
Madaxwayne Kibaki ayaa si qeexan uga hadlay dagaalada ciidanka Kenya ay kula jiraan kooxda Al-shabaab, waxaana uu xukuumadiisa ku difaacay inaysan ahayn mid duulaan ku ah nabad-galyada dalka Soomaaliya, balse ay tahay mid suganaysa amnigeeda, isla markaana u hoggaansamaysa sharuucda caalamiga ah, iyo baaqyada kasoo baxa Midawga Africa iyo urur-goboleedka IGAD.
Dhinaca kalena magaalada Kampala ee dalka Uganda kulan ay shalay kuwada qaateen madaxwaynaha dalka Uganda Yuweri Musafni iyo wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya Mr Musas Mutakgula ayaa si qeexan waxay uga wadahadleen arrimaha la xiriira ammaanka xaduudaha iyo la dagaalanka kooxda Al-shabaab, waxaana 2-da masuul ay isku afgarteen in ciidamada AMISOM, iyo ciidanka Kenya ay muhiim tahay inay iska kaashadaan la dagaalanka kooxda Al-shabaab.
Waxgaradka degmada Taleex oo saluugay habka loo agaasimayo shirka Khaatumo 2.
5 qof oo dhimatay, tiro kale oo ku dhaawacantay dagaal ka qarxay deegaanka Xaya, J. Hoose.